Asa ao amin'ny GCFB - Galveston County Food Bank
Ianao ve mitady asa mahafa-po kokoa izay mahasoa ny mpiara-monina? Alefaso azafady ny tohiny Julie@galvestoncountyfoodbank.org
Galveston County Food Bank dia orinasa tsy misy fanafody ary EOE
Azafady tsindrio ny lohatenin'ny asa eto ambany raha hijery ny famaritana sy ny takiana.
Mpamily CDL kilasy A
Ny Bankin'ny Sakafo any Galveston County dia mitady olona mahay sy manentana tena hanatevin-daharana ny ekipa mitondra fiara.
Class A CDL Driver dia hitazona ny vokatra fitahirizam-bokatra ho fitehirizana sy fizarana manaraka ny torolàlana rehetra. Ny toerana dia takiana amin'ny famoahana sy ny famoahana ireo vokatra mankany na avy amin'ny trano fitobiana amin'ny alàlan'ny kamio sy ny kamiaobe, ny van ary ny fiasan'ny fitaovam-pivarotana rehetra. Ny toerany dia hiasa amin'ny fiaran'ny Banky Sakafo ho an'ny fandraisana an-tanana ny varotra. Ity famaritana ny asa ity dia tsy natao handrakofana na hahitana lisitra feno amin'ny hetsika, andraikitra na andraikitra takian'ny mpiasa.
Diplaoma ambaratonga faharoa na GED
Validasy kilasy A CDL misy rakitsoratra azo ekena
Farafahakeliny 1 taona niainana mitondra fiara
Fahaizana mampiakatra matetika entana hatramin'ny 50 lbs.
Fahalalana fototra momba ny fitaovana sy fomba fiasa mitondra fiara azo antoka
Fifantohana tsara amin'ny fiarovana
Fahaizana mijoro matetika, mandohalika, miondrika, mandeha, miondrika ary miakatra.
Fahaizana miasa amin'ny toetr'andro, ny hafanana ary ny hatsiaka.
Tiana kokoa ny traikefa jack paleta elektrika
Aleo forklift traikefa
Fanamarinana forklift miampy! (ny fanamarinana eo an-toerana dia tsy maintsy vitaina aorian'ny fotoana hanombohany asa)
Fandaharam-potoana azo ovaina; isaky ny sabotsy sy hariva takiana.
Ny GCFB Associate dia hanampy amin'ny trano fisakafoanana sy ny latabatra eo aloha ao amin'ny Galveston County Food Bank. Izy dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny haavon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny fandaharam-potoana hiasana amin'ity toerana ity dia ny alatsinainy - zoma miaraka amin'ny takariva sy faran'ny herinandro. Ity famaritana ny asa ity dia tsy natao handrakofana na hahitana lisitry ny hetsika, andraikitra na andraikitra mavesatra takian'ny mpiasa.
Diplaoman'ny High School na mitovy
Avereno jerena ny mpandray ny latabatra eo aloha
Miasa amin'ny pantry ho an'ny fizarana vokatra ho an'ny mpanjifa
Araho maso ny fahadiovana sy ny fanadiovana ny pantry isan'andro
Miaraha miasa amin'ny Coordinator Volunteer amin'ny tetikasa toy ny karazan-tsakafo maina sy mangatsiaka ilaina
Mifampiresaka ary miasa miaraka amin'ireo mpiasa mitahiry trano sy fitantanan-draharaha
Olona mivoaka ho an'ny toerana ambony angovo ao amin'ny fiarahamonina
Fahafahana mandray fanapahan-kevitra sy famahana olana amin'ny fotoana tena izy
Ny fahaiza-manao an-tsoratra sy am-bava amin'ny teny espaniola no tadiavina
Jack paleta elektrika sy traikefa forklift irina
Fahaizana mampiakatra matetika entana hatramin'ny 50 lbs
Ilaina ny fitiliana madio sy ny fitsapana zava-mahadomelina
Ny Galveston County Food Bank dia orinasa tsy misy fanafody ary EOE.
Job Type: manontolo andro
Aloavy: $ 10.00 - $ 12.00 isan'ora
Fiantohana ny fahitana
Fihodinana 8 ora
Sekoly ambaratonga faharoa na mitovy (Required)
Microsoft Excel: 1 taona (Aleo)
Fahazoan-dàlana hamily (ilaina)
Mpanabe momba ny sakafo: tsenan'ny tantsaha sy fivarotana an-joro
Ny mpanabe momba ny fanjarian-tsakafo dia hanao tatitra amin'ny Mpitantana ny sakafo ary hiasa amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny ekipa fanabeazana momba ny fanjarian-tsakafo amin'ny alàlan'ny fanomezana iray Feeding Texas. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny fandraisana andraikitra ara-tsakafo ao amin'ny fivarotana an-jorony sy tsenan'ny tantsaha manerana ny faritr'i Galveston. Tetikasa vaovao vaovao eo ambanin'ny Feeding Texas Network, mitaky fanavaozana sy drafitra stratejika.
Bachelor ny siansa amin'ny sakafo ilaina.
Fepetra ilaina amin'ny traikefa:
Fifandraisana matanjaka, fifandraisan-davitra (na an-tsoratra na am-bava), fahaiza-manao eo amin'ny fandaminana sy stratejika;
Ny fahaiza-manao matanjaka amin'ny fananganana fifandraisana dia TSY MAINTSY;
Fahafahana mampiasa Word, Excel, Access & programa hafa mitovy amin'izany;
Vonona handray ny fahaiza-manao ara-kolontsaina amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa marobe;
Fanandramana amin'ny fanabeazana ara-pahasalamana sy / na ny fiaraha-monina sy ny sakafo mahavelona, ​​anisan'izany ny famoronana fitaovana sy fandaharam-potoana mifanaraka amin'ny taona.
Aleo amin'ny fiteny roa
Eo am-panatanterahana ny andraikitr'ity toerana ity dia takiana amin'ny fandehanana matetika, hipetraka, hiondrika ary hitraka ny mpiasa mandritra ny any amin'ny banky sakafo sy amin'ny toerana iarahan'ny maso ivoho;
Ny fitaovam-pivarotana kely, ny tohatra fiakarana, ary ny hetsika fitahirizam-bokatra hafa dia mety ilaina indraindray, saingy azo omena fiofanana;
Ny mpiasa dia mety takiana amin'ny miondrika, mandohalika, miondrika, mandady, miakatra hatramin'ny 50 pounds, miakatra tohatra ary miasa amin'ny kamio misokatra na fiara fitaterana.
Miasa Tontolo iainana:
Ny tontolon'ny asa dia misy ny faritra birao ary koa ny trano fanatobiana entana sy ny toerana ivelan'ny toerana.
Fanonerana: $ 24 / ora
Fotoana manontolo: 40 ora isan-kerinandro
Mpanabe momba ny sakafo: Fanabeazana ho an'ny fiaraha-monina
Ny mpanabe momba ny fanjarian-tsakafo dia hanao tatitra amin'ny Mpitantana ny sakafo ary hiasa amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny ekipa sakafo mahavelona azy eo ambanin'ny fanomezana Feeding Texas. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fampiharana SNAP Ed amin'ny alàlan'ny kilasy fisakafoanana avy amin'ny fandaharam-pianarana efa nekena natao ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe manana fidiram-bola ambany.
Bachelor ny siansa amin'ny sakafo ilaina
Fahaiza-manao fananganana fifandraisana matanjaka;
Vonona handray ny fahaiza-manao ara-kolontsaina amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo karazana mpanjifa.
Aloavy: $ 23.00 isan'ora